सोमवार, पुष १२, २०७८ विजयपथ न्यूज डेस्क
वीरगञ्ज, १० पुष । नेपाल औषधी तथा बिक्रि प्रतिनीधि संघ पर्साले आयोजना गरेको प्रथम एन.एम.एस.आर.ए. एफ १५ नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ ।
वीरगञ्ज स्थित आदर्शनगर रङ्गशालामा सम्पन्न फाइनल खेलमा एन.एम.एस.आर.ए. रेड विजयी भएको छ ।
क्वेस्ट फार्मास्युटिकल्सलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै एन.एम.एस.आर.ए.ले एतिहासिक विजय हासिल गरेको हो ।
टस जितेर पहिलो इनिङ खेलेको क्वेस्टले १३ ओभर खर्चेर १० विकेट गुमाउँदै ८७ रन बनाएको थियो । जवाफी इनिङमा रेडले ७ ओभर ३ बल खेलेर १ विकेट गुमाउँदै ८८ रन बनाएर क्वेस्टलाई ९ रनले हराएको एन.एम.एस.आर.ए.का सचिव राम गोसाईंले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्लेयर अफ थ म्याचको उपाधि एन.एम.एस.आर.ए. रेडका बलर सचिन कुमारले हासिल गरेका छन् । उनले ३ ओभरमा १५ रन खर्चिंदै ३ विकेट लिएका थिए । त्यसतै प्लेयर अफ द सिरिज उपाधि एन.एम.एस.आर.ए. रेडकै राजेन्द्र बस्नेतले प्राप्त गरेका छन् ।
विजेता टिम एन.एम.एस.आर.ए.रेडलाई प्रमुख अतिथि क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका मार्केटिङ निर्देशक तथा एन.एम.एस.आर.ए.का संस्थापक सचिव शैलेन्द्र प्रसाद वर्माले २५ हजार रुपैयाँ नगद, ट्राफि, सिल्ड र सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसैगरी दोस्रो स्थान हासिल गरेको क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सलाई १५ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरिएको सचिव गोसाईले बताए ।
तीन दिवसीय प्रतियोगितामा म्यागनस फर्मा, भास्कर फर्मास्युटिकल्स, एन.पी.एल. लगायत ८ वटा टिम सहभागी रहेका थिए । एन.एम.एस.आर.ए. वीरगञ्जका अध्यक्ष मनोज साहको सभापतित्वमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपाल औषधी व्यवसायी संघ प्रदेश २ का सचिव पप्पु झा, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष ताजुद्दीन अन्सारी, सचिव विश्वाज राज गौतम, पिनका अध्यक्ष महेबुब आलम, पीसीनका अध्यक्ष शिवजी यादव, नबिल बैंक श्रीपुर शाखाका प्रबन्धक सन्तोष साह, भोलेन्टियर समूहका संयोजक राजन श्रीवास्तव लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतियोगितालाई क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स, भास्कर फारमासुटिकल, म्यागनस फर्मा, भवानी अफसेट प्रेस, एक्स्पर्ट एडुकेसन एण्ड भिषा सर्विसेज वीरगञ्ज, फेयर डिल मेडिकल स्टोर, पाथ फर्मा डिष्ट्रिब्यूटर, निर्जल वाटर, फर्माकेम डिष्ट्रिब्यूटर, यात्रा डेली प्रा.लि. लगायतले प्रायोजन गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, पुष १२, २०७८, १२:२८:३५
नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ निकासा
प्रथम गिरिजा प्रसाद कोइराला गोल्डकपको उपाधी सप्तरीले चुम्यो